ကတော့ Hack Get - သငျသညျခင်မှာကိုသိရှိရမည်ကဘာလဲ - အဆိုပါနေ့၏ကတော့
ဆုံးဖြတ်ချက်မှ Making ကတော့ Hack ရ သင်၏အသက်တာနှင့်အတူကောင်းသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာ၏ခဲ၌သင်တို့ကိုတင်ထားတော်မူမည်, သင်ကအောင်မြင်မှုရရန်လုံးဝသင့်ရဲ့ကတိကဝတ်များ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖွင့်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်.
အဆိုပါကတော့ Hack အစီအစဉ်ကိုရပ်စယ်လ် Brunson အတူပါလာသကဲ့သို့ဤသည်နေ့ရက်ကာလနှင့်အောင်မြင်သောအဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်ကို၏ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင်ယူ၏စျေးနှုန်းပူပြင်းတဲ့ကုန်စည်င် ကုန်ကျ.
ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းငယ်သာ downsizing ရှိပါတယ်. စယ် အလွန်ဖြောင့်သငျနှငျ့အတူသငျသညျသူကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ရဲ့ပစ္စည်းထိတွေ့ဆက်ဆံယခုအချိန်တွင်နေ, သူသည်သင်တို့ကိုသူအဲဒီမှာရဖို့ယူခဲ့ရတယ်ရှည်လျားသောလမ်းကိုသိပေးနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်ပြီးနည်းမှန်လမ်းမှန်သွားလျှင်, သင်သည်လည်းအောင်မြင်မှုရရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်နေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပျက်မှမမျှော်လင့်ပါဘူး.
အောက်မှာ Filed: Funnel Hacks အတူ Tagged: ကတော့ Hack ရ